ယခုအချိန်တွင်ဂစ်တာသမားများကြားအများဆုံးနားထောင်ခဲ့သော Cardi B ၏ခရီးစဉ်မှာ - TELES RELAY
ဤတွင်ရက်ပ်၏နားမထောင်ဆုံးသော Cardi B ၏ခရီးဖြစ်သည်
လူထုမှတ်ပုံတင်တွင် Belcalis Marlenis Almanzar ၁၉၉၂ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်တွင်နယူးယောက်၌ Bronx တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး Cardi B သည်တောက်ပသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့်အတူအမေရိကန်ရက်ပ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သူမဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကစူပါမားကတ်တစ်ခုတွင်ငွေကိုင်တစ် ဦး နှင့်အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်တွင်အဝတ်အစားအစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။
သူမသည်သူမသည်စာသင်ကြားမှုနှင့်အဝတ်အထည်ကင်းရှင်းသည့်အလုပ်နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ကျောင်းမတက်မီမန်ဟက်တန်ရပ်ကွက်ကောလိပ်သို့ Borough ၌ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ Cardi B သည်သူမကလေးထိန်းမှငွေရှာနေသည်ဟုယုံကြည်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သူမ၏မိခင်ကိုလိမ်ခဲ့သည်။
Cardi B ဟာ Instagram မှာသူမဗွီဒီယိုအတိုတွေကြောင့်လူသိများလာတယ်။
Cardi B သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဂီတတွင်သူမအတွက်နာမည်တစ်ခုစတင်ခဲ့သည်။စန်းပြန်းShaggy မှဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အများပြည်သူကသူမကိုအဖြစ်မှန်ပြပွဲမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ် "နယူးယောက် Love & Hip Hop
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၇ ရက်တွင်သူမပထမခေါင်းစဉ်ကို "Gangsta B ဂီတ၊ အတွဲ ၁ » မတ်လ ၇ ရက်၊ ၂၀၁၆ တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင်သူသည်ဒုတိယ mixtape ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။Gangsta B ကိုဂီတ, vol2"။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မေလတွင်သူမသည်အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လာသည့်အဆိုတော်နှင့်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဟစ်ဟော့ပ်အဆိုတော်အမျိုးအစားများတွင် BET ဆုကိုရခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်သူမရဲ့ဂုဏ်ကျက်သရေဟာနီးကပ်နေပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာသူမဟာသူမရဲ့တစ်ကိုယ်ရေဘဝကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။Bodak အဝါရောင် " အရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ငါးကြိမ်ပလက်တီနမ်အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ Cardi B သည်အမေရိကန်ဂီတ၏အကြီးမားဆုံးသောကြယ်များနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်ခြင်းများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကသူ့ကိုသူ၏များစွာသောဆုရရှိခဲ့?
ဂရမ်မီဆုတစ်ခု၊ Billboard ဂီတဆုခုနစ်ခု၊ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်ငါးခု၊ အမေရိကန်ဂီတဆု ၄ ခု၊ လေးခု MTV Video Music Awards၊ BET ဆုလေးခုနှင့် BET Hip Hop ဆု ၁၁ ခု။ ထို့အပြင် 2019 ခုနှစ်တွင်ယခုနှစ်သီချင်းရေးသူ ASCAP ဆု။
Cardi B သည်နစ်ကီမီနာပြီးလျှင်အမေရိကန်ရက်ပ်အများဆုံးနားထောင်ခဲ့သည့် ၃ နှစ်ကြာသည်။ လူအများစုသည် Cardi ၏လှပသောတေးသံများကိုမွေ့လျော်ခံစားကြသည်။ ပြီးတော့မင်းဒါကိုကြိုက်လား?
ဤဆောင်းပါးသည် https://afriqueshowbiz.com/cardi-b-voici-le-parcours-de-la-rappeuse-americaine-la-plus-ecoute-du-moment/ တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
အသက် (၂၄) နှစ်အရွယ်ရှိမုဒိမ်းကျင့်မှုအားအသက် (၁၃) နှစ်အရွယ်ဥယျာဉ်ထဲ၌လွှတ်လိုက်သည်